Imbali yasePortugal - Ubume
I-Portugal iyindawo ekude eYurophu, kwi-Peninsular yase-Iberia. Iphethwe yiSpeyin ukuya ngasentla nakuma empuma, kunye ne-Atlantic Ocean ukuya ngasentshona nangasentshonalanga.
Iingxelo zembali yasePortugal
Izwe lasePortugal lavela kwinkulungwane yeshumi ngexesha lokubuyiselwa kobuKristu kwi-Peninsula yase-Iberia: kuqala njengommandla ophantsi kolawulo lwe-Counts yasePortugal kwaye emva koko, phakathi kwekhulu leshumi elinesibini, njengobukumkani phantsi kweNkosi u-Afonso I.
Itrone ke yahamba ngexesha elixakekayo, kunye neenkani ezininzi. Ngexesha leenkulungwane ezilishumi elinesibhozo neshumi elinesithandathu elinesibini ukuhlola kunye nokunqoba kweAfrika, iNingizimu Melika kunye neIndiya zanqoba lohlanga ubukumkani obutyebi.
Ngowe-1580 inkxalabo elandelelanayo yabangela ukuhlasela okuphumelelayo ngu-King of Spain neSpeyin rule, iqalisa ixesha elaziwa ngabachasi njengeSpanish Captivity, kodwa imvukelo ephumelelayo ngo-1640 yaholela ekuzimele. IPortugal yalwa kunye neBrithani kwiimfazwe zeNapoleonic, ezahlukileyo zezopolitiko zenza unyana kaKumkani wasePortugal waba nguMlawuli waseBrazil; ukunyuka kwamandla omkhosi kulandelwa. Inkulungwane yeshumi elinesithoba yabona imfazwe yoluntu, ngaphambi kweRiphabhuliki yabhengezwa ngo-1910. Nangona kunjalo, ngo-1926 umkhosi wokulwa nomkhosi wabakhokela kubaphathi abadalela kude kube ngo-1933, xa uNjingalwazi othiwa nguSalazar uthatha, wabusa ngendlela ekhohlisayo. Ukuthatha umhlalaphantsi wakhe ngenxa yokugula kwalandelwa emva kweminyaka embalwa emva kokubambana, ukuvakaliswa kweRiphablikhi yesithathu kunye nokuzimela kweenkoloni zaseAfrika.
Abantu abalulekileyo beMbali yasePortugal
Unyana we-Count of Portugal, u-Afonso Henrique wayeyinxalenye yokubambisana nabantu basePortugal ababesaba ukulahlekelwa amandla abo kuGalician. I-Afonso iphumelele imfazwe okanye i-tournament kwaye yaxoshwa ngempumelelo unina, owayebizwa ngokuba yiNdlovukazi, kwaye ngo-1140 wayezibiza ngokuba yiNkosi yasePortugal. Wasebenzisa ukuseka isikhundla sakhe, kwaye ngo-1179 wayekholise uPapa ukuba ambone njengenkosi.
Ebizwa ngokuba ngumlimi, iDinis ngokuqhelekileyo ibonwa ngokuba yinkosi yaseBurgundi, kuba waqala ukudala i-navy esemthethweni, eyayisungula iyunivesiti yokuqala yaseLisbon, eyakhuthaza inkcubeko, yakha enye yeziko lokuqala le-inshorensi yabarhwebi kunye nolwandiso lwezorhwebo. Nangona kunjalo, ukuxhaphaza kwakhula phakathi kweentlonelo zakhe kwaye waphulukana ne-Battle of Santarém ukuya kwindodana yakhe, owathatha isithsaba njengoKumkani Afonso IV.
UNjingalwazi wezoqoqosho kwezopolitiko, uSalazar wamenywa ngowe-1928 yiPortugal ukunyanzelisa umkhosi ukujoyina urhulumente nokulungisa ingxaki yezemali. Ngomnyaka we-1933 wanconywa ukuba abe nguNdunankulu, kwaye wabusa - ukuba akayena njengomlawuli (nakuba kukho ingxabano yokuba wayekho), ngoko ngokuqinisekileyo njengongqongqo, olwaphulo-mthetho wepalamente, kude kube yilapho ukugula kuye kwamshukumisela ukuba ashiye umhlala-phantsi ngo-1974.
Ziziphi ezinye iincwadi ezibalulekileyo zoLwazi lweeNzululwazi?